ဗဟုသုတ Archives - CRT News
နိုင်ငံရေး, ဗဟုသုတ, လူ့အခွင့်အရေး
စစ်ကောင်စီက ပြည်သူများ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဟန်းဆက်များအားလုံးကို အခွန် ကောက်၊ မှတ်ပုံတင်ခိုင်းပြီး လုံခြုံရေးအရ အလုံးစုံ ထိန်းချုပ်မည်
စစ်ကောင်စီက ပြည်သူများ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဟန်းဆက်များအားလုံးကို အခွန် ကောက်၊ မှတ်ပုံတင်ခိုင်းပြီး လုံခြုံရေးအရ အလုံးစုံ ထိန်းချုပ်မည် ၊ ဖုန်းဟန်းဆက်များ၏ IMEI နံပါတ်များ မှတ်ပုံမတင်လျှင် အခွန်မဆောင်လျှင် ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြု ခွင့်ပိတ်မည် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၃ စစ်ကောင်စီက ပြည်သူများ အသုံးပြုနေသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဟန်းဆက်များ၏ IMEI …
မြင်ရသူတိုင်း အံ့ဩဝမ်းနည်းသွားရတဲ့ အင်းလေးကန် ရေခမ်းခြောက်မှု မြင်ကွင်း
အင်းလေးကန်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကန်ကြီးတွေအနက် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ကန်ကြီး တခုဖြစ်ပါတယ်။ အင်းလေးကန်ကို မှီခိုနေကြတဲ့ လူတွေ အများအပြား ရှိရုံသာမက တိရစ္ဆာန်၊ ပိုးမွှားနဲ့ သစ်ပင်စတဲ့ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ နေထိုင် ရှင်သန်ပေါက်ဖွားရာ နေရာ တခုဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင်များက အင်းလေးကန် ခမ်းခြောက်မှုကို အစိုးရနဲ့ …
တောင်ကြီးသင်္ကြန်ဗဟိုမဏ္ဍပ်၌ ‌ဖျော်‌ဖြေရန် KTV အမျိုးသမီးဆိုရှင် ၁၂ဦးထက်မနည်း ခေါ်ယူထား
တောင်ကြီးသင်္ကြန်ဗဟိုမဏ္ဍပ်၌ ‌ဖျော်‌ဖြေရန် KTV အမျိုးသမီးဆိုရှင် ၁၂ဦးထက်မနည်း ခေါ်ယူထား မဲခေါင်၊ ဧပြီ ၁၃ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခန့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တောင်ကြီးမြို့တွင် ပြုလုပ်နေသည့် သင်္ကြန်ဗဟိုမဏ္ဍပ်၌ ဖျော်‌ဖြေရန် KTVမှ အမျိုးသမီးအဆိုရှင် ၁၂ဦးထက်မနည်းကို ခေါ်ယူထားကြောင်း စစ်တပ်တွင်းသတင်းရင်းြမစ်များထံမှ သိရသည်။ တောင်ကြီးမြို့၊ သစ်တောရပ်ကွက်ရှိ ၎င်းတို့ရုံးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးကြားတွင် …
ဆောင်းပါး, ဗဟုသုတ, သတင်း
ရန်ကုန်အပါအဝင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၄ ခု တွင် ယနေ့ည ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှစ၍ လေပြင်းတိုက်ခတ်ကာ မိုးကြီးပြီး မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများ သတိပြုရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ရန်ကုန်အပါအဝင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၄ ခု တွင် ယနေ့ည ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှစ၍ လေပြင်းတိုက်ခတ်ကာ မိုးကြီးပြီး မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများ သတိပြုရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင်တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၄ ခု၌ ဧပြီ ၉ ရက်(ယနေ့)ည ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းမှစ၍ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးကြီးခြင်းနှင့်မိုးကြိုးပစ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သဖြင့်သတိပြုနေထိုင်ကြရန် မွန်၊ကရင်၊တနင်္သာရီမိုးလေဝသ အထူးစောင့်ကြည့်ထုတ်ပြန်ရေးမှထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း …
ဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာ, ဗဟုသုတ
သာကောတို့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို တစပြီး တစ ဝါးမျိုသွားတဲ့ နည်းဗျူဟာ … ( အဘ တို့ ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာ….)
သာကောတို့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို တစပြီး တစ ဝါးမျိုသွားတဲ့ နည်းဗျူဟာ … ( အဘ တို့ ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာ….) သီဟိုဠ်သမ္မတ မဟိန္ဒာ ရာဇပါစက ဆိုတာ တမီလ်သူပုန်တွေကို ခြေမှုန်း နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် သူ့ နိုင်ငံထဲမှာ လူကြိုက်များ ရေပန်းစားခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒိ …
ခြင်တွေ ပြေးအောင် သင့်ရဲ့ အိမ်ထဲမှာ ဒီအပင်လေး (၅) ပင် စိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော်
မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ ခြင်တွေကို ခြင်ဆေးခွေ၊ ခြင်ဖျန်းဆွေးတွေနဲ့ နှိမ်နှင်းနေတုန်းလား? ဒါက အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်ရှိတဲ့ အိမ်တွေဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အန္တရာယ်များလွန်းပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အန္တရာယ်မများဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ခြင်တွေပြေးစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဟာ အပင်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အပင်စိုက်တာလည်း ဝါသနာပါတယ်၊ ခြင်တွေကိုလည်း …
အင်္ကျီမှာ ဆီစွန်းသွားတဲ့အခါ အရမ်းကို စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ တချို့ ဆီစွန်းတွေက မပျောက်တာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်ရတဲ့ အဝတ်အစားတွေ အလကား ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းတွေကို သိထားရင် အဝတ်အစား ဆီစွန်းလည်း စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်။ ၁။ ရှားစောင်းလက်ပက်ဂျယ် ရေနွေးထဲမှာ ဆီစွန်းတဲ့ အဝတ်အစားကို ထည့်စိမ်လိုက်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ပက်ဂျယ်ကို …